Nagu saabsan - Hebei Chenli Rigging Group Co., Ltd.
Qalabka silsiladda korantada
Mashiinka Mashiinka Xarkaha
Nidaamka Xakamaynta Tayada
Hebei Chenli Group Co., Ltd. (Chenli Group) oo maareyneysa 3 hoosaad oo gebi ahaanba leh iyo 4 shirkad wadaag ah oo laamo ay maamusho, waxay ku taalaa magaalada wax soo saarka iyo khaladaadka alaabada ee gobolka Hebei, taas oo ah shirkad weyn oo ku takhasustay baaritaanka 、 nashqadeynta iyo soo saarista wax soo saarka iyo kor u qaadista. Taxane badan oo ka badan 3000 oo qeexitaano kala duwan, wax soo saar iyo awood sheegasho ah ayaa gaadhay 7 milyan oo set. Awoodeena oo dhammaystiran ayaa ka horaysa tartamayaasha warshadeena.
Kooxda Chenli waxay leedahay teknolojiyad wax soo saar tayo sare leh iyo koox maamul, Nidaamka maaraynta guryaha casriga ah iyo habka waxqabadka habka xakamaynta tayada tiknoolajiyada wax soo saarka, asal ahaan waa la dhameystiray isbeddelka ka imanaya maamulka xakamaynta ee ka hortagga. Shaqaalaha nidaamsan ee shaqeynaya iyo tayada alaabada ayaa kudhow ama kabadan 4 exceed
Laga soo bilaabo 2000, Chenli Group shirkado hubaysan oo wata maareynta sayniska iyo farsamada sayniska. Shirkaddayadu waxay maal-galisay labaatan milyan oo RMB ah, oo ay dhistay xarunta tijaabada tayada shirkadda. Isla isla warshadda horay Chenli Group waxay u gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah ee ISO9001. 2005, badeecadu waxay dhaaftay European CE, Jarmalka GS waxsoosaarka tayada iyo sugnaanta amniga. Kooxda Chenli siday u kala horreeyaan sannadihii 2008, 2010, iyo 2012 waxay heleen "silsiladda wax qaadista", "shakaalka kor u qaadista", "qaadista sanduuqa wax lagu rido" saddex shati qaran,
Hal ku dhigga shirkadda ee Chenli Group ayaa ah in macmiilku sax yahay weligiis. Daacadnimada iyo ilaalinta iimaanka, sameynta ganacsiga si guul leh, waqtigan xaadirka ah Chenli Group ee dalkeenna in ka badan 100 shirkad kooxeed oo weyn, mashruuca mudnaanta waddanku wuxuu bixiyay noocyo kala duwan oo ammaan ah oo la isku halleyn karo. Products waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in mashiinada, metallurgy, korontada, tareenka, mashaariicda ilaalinta biyaha, dekedaha, duulista, milkiilaha, baabuurta, batroolka iyo warshadaha kiimikada iwm Chenli Group ee wax soo saarka waxaa lagu iibiyaa in ka badan 30 gobollada gudaha, magaalooyinka iyo 100 gobollada, sida Bariga Dhexe 、 Midowga Yurub, Koonfur-bari Aasiya, Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika iwm oo loo dhoofiyo in ka badan 50 dal iyo gobol .Soosaarka si wanaagsan ayaa loo soo dhoweeyey loona aaminay macaamiisha. Taageeradaada Chenli Group waxay noqotay hal-abuurnimada maaraynta warshadaha iyo teknolojiyadda. hogaamiyaha hal-abuurnimada .Chenli Group ayaa ka dhigi doonta macaamiisha sumadda chenli inay weligood hanti leeyihiin, Chenli Group waxay diyaar u tahay inay had iyo jeer ku garab istaagto.
Enterprise maareeyso ujeeddada
Tayo sare, heer sare ah, u oggolow macaamiisha inay dareemaan kalsooni badan, kalsooni badan, si fudud!
Ganacsigu ujeedada maareynta
Hogaamiyaha hal-abuurnimada maareynta warshadaha isdaba-marinta iyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed.Chenli Group wuxuu diyaar u yahay inuu had iyo jeer ku garab istaago, wuxuu ka dhigi doonaa macaamiisha sumadda Chenli inay leeyihiin weligood hanti.
Ganacsi maaraynta fikradda
Ku adkeyso hagaajinta, warshadaha khayaanada u gaarka ah faa'iidooyinka maaraynta horumarsan, faa'iidada tikniyoolajiyadda, faa'iidada astaanta, had iyo jeer la kulmo shuruudaha kastamka.
KOOXDA HEBEI CHENLI:
Ilaa 1991, Madaxa Shirkadda
Laga soo bilaabo 2005, Shirkadda Qing yuan
Tan iyo 2012, Shirkadda Boye
Tan iyo 2020, Shirkadda Jiangsu
SOO SAARKA CHENLI ADDUUNKA OO DHAN
Halkan riix si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah
Alaabada Kulul - Khariidadda bogga Akhri wax dheeraad ah
NO.33 FAZHAN Wadada Bari, DEGMADA QINGYUAN, BAODING, HEBEI, CHINA